GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Turkish Turkmen Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ee, Chineke ga-agbaghara gị ma i mee ihe ndị i kwesịrị ime. Baịbụl kwuru na Chineke ‘dị njikere ịgbaghara mmehie’ nakwa na ọ ‘ga-agbaghara anyị mmehie n’ụzọ dị ukwuu.’ (Nehemaya 9:17; Abụ Ọma 86:5; Aịzaya 55:7) Ọ na-agbaghara mmehie anyị kpamkpam. Ọ na-ehichapụ mmehie anyị. (Ọrụ Ndịozi 3:​19) Chineke agaghịkwa echeta mmehie anyị n’ihi na o kwuru, sị: “Agakwaghị m echeta mmehie ha.” (Jeremaya 31:34) Ọ gbaghara anyị, ọ naghịzi echeta mmehie anyị mere n’oge gara aga ka o nwee ike ịta anyị ahụhụ ugboro ugboro ma ọ bụ kwuo na anyị bụ ndị ọjọọ.
Ma, ihe mere Chineke ji agbaghara anyị abụghị maka na Chineke adịghị ike ma ọ bụ na ọ na-ele anyị anya n’ihu. Ọ naghị agbanwe iwu ya. Ọ bụ ya mere na ọ naghị agbaghara ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-emejọ.​—Jọshụa 24:19, 20.
Kweta na i mehiere megide Chineke. N’agbanyeghị na e nwere ike inwe ndị ihe i mere na-ewute, i kwesịrị ibu ụzọ ghọta na onye ọ bụla mehiere bụ Chineke ka o mejọrọ.​—Abụ Ọma 51:1, 4; Ọrụ Ndịozi 24:16.
Kwupụtara Chineke mmehie gị n’ekpere.​—Abụ Ọma 32:5; 1 Jọn 1:9.
Ihe i mere kwesịrị iwute gị nke ukwuu. Ọ bụrụ na mmadụ enwee “mwute dị ka uche Chineke si dị,” ọ ga-eme ka onye ahụ chegharịa. (2 Ndị Kọrịnt 7:​10) Ọ pụtakwara ịkwa ụta banyere ihe mere i ji mee mmehie ahụ.​—Matiu 5:​27, 28.
‘Chigharịa,’ ya bụ, gbanwee otú i si akpa àgwà. (Ọrụ Ndịozi 3:​19) O nwere ike ịpụta ịkwụsị ihe ọjọọ ahụ ị na-eme ma ọ bụkwanụ ịgbanwe otú i si eche echiche na otú i si akpa àgwà.​—Ndị Efesọs 4:​23, 24.
Gbaa mbọ mezie ihe ị na-emetaghị. (Matiu 5:23, 24; 2 Ndị Kọrịnt 7:​11) Rịọ ndị i mejọrọ ma ọ bụ ndị ihe i mere wutere mgbaghara, gbalịakwa mezie ihe ndị i nwere ike imezi.​—Luk 19:​7-​10.
Rịọ Chineke ka ọ gbaghara gị n’ihi àjà Jizọs chụrụ. (Ndị Efesọs 1:7) Ị chọọ ka Chineke za ekpere gị, i kwesịrị ịgbaghara ndị mejọrọ gị.​—Matiu 6:​14, 15.
Ọ bụrụ na i mere mmehie dị́ oké njọ, gwa ya onye ruru eru ga-eji Baịbụl nyere gị aka, onye rukwara eru ikpere gị ekpere.​—Jems 5:​14-​16.
Ọ bụrụhaala na anyị emee ihe Baịbụl kwuru ka anyị mee ma anyị mehie, Chineke ga-agbaghara anyị n’ihi na e nweghị mmehie ọ na-agaghị agbagharali. Ọ ga-agbagharali mmehie ndị dị oké njọ nakwa ndị e mere ugboro ugboro.​—Aịzaya 1:​18.
Dị ka ihe atụ, Chineke gbaghaara Eze Devid mgbe ọ kwara iko, gbuokwa ọchụ. (2 Samuel 12:​7-​13) Pọl onyeozi chere na ọ bụ ya kacha bụrụ onye mmehie, ma a gbaghaara ya. (1 Timoti 1:​15, 16) Chineke tara ndị Juu ụta na ọ bụ ha gburu Jizọs, bụ́ Mesaya. Ma, Baịbụl kwuru na ọ bụrụ na ha chegharịa, a ga-agbaghara ha.​—Ọrụ Ndịozi 3:​15, 19.
E nweghị mmadụ ọ bụla nwere ike ịgbaghara mmadụ ibe ya mmehie o mere megide Chineke. N’agbanyeghị na ịgwa onye ọzọ ihe anyị mejọrọ nwere ike inyere anyị aka mgbe anyị mehiere, ọ bụ naanị Chineke na-agbaghara mmehie.​—Ndị Efesọs 4:32; 1 Jọn 1:​7, 9.
Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ka Jizọs bu n’obi mgbe ọ gwara ndịozi ya, sị: “Ọ bụrụ na unu agbaghara ndị ọ bụla mmehie ha, a gbagharawo ha mmehie ndị ahụ; ọ bụrụ na unu agbagharaghị mmehie nke ndị ọ bụla, a gbagharaghị ha”? (Jọn 20:23) Ihe Jizọs na-ekwu banyere ya bụ ike ọ ga-enye ndịozi ya mgbe ọ ga-enye ha mmụọ nsọ.​—Jọn 20:22.
Dị ka o kwere ha ná nkwa, o nyere ndịozi ya onyinye a mgbe a wụkwasịrị ha mmụọ nsọ n’afọ 33 Oge Ndị Kraịst. (Ọrụ Ndịozi 2:1-4) Ọ bụ ya mere Pita onyeozi ji nwee ike ikpe Ananayas na Safaịra ikpe. Chineke mere ka Pita mata na ihe ha kwuru abụghị eziokwu, ikpe ọ mara ha gosikwara na a gaghị agbaghara ha mmehie ha.​—Ọrụ Ndịozi 5:​1-​11.
Onyinye ahụ nakwa onyinye ndị ọzọ e si n’ike mmụọ nsọ nye ha, dị ka, ịgwọ ọrịa na ịsụ asụsụ ọzọ, kwụsịrị mgbe ndịozi Jizọs nwụchara. (1 Ndị Kọrịnt 13:​8-​10) N’ihi ya, e nweghị mmadụ ọ bụla nwere ike ịkagbu mmehie mmadụ ibe ya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Chineke Ọ̀ Ga-agbaghara M?
ijwbq isiokwu 99